Dhoofinta: 12 Talaabooyin Muhiim u ah Guusha E-Ganacsiga
Inta badan mashaariicda ganacsiga (jirka ama elektiroonigga) waxay dhinteen kahor intayna bilaaban. Intooda badan, waxay ku halaagsan yihiin uur qaadista.
Uma baahnid inaad sii kordhiso tirakoobyadan. Maya, uma baahnid inaad ku dhacdo darbi si aad u taageerto isbeddelladan mugdiga ah.
Guusha beenta ugu weyn uguna caadiga ah ee diyaarinta. Diyaargarow aad u wanaagsan, waxaad fursad badan ka heli doontaa dhinacaaga. Taasina waa tan aan kuu soo bandhigno.
Koorsadan degdegga ah iyo anteenada, waxaan kuu soo bandhigeynaa inaad dib u eegto 12 tallaabo oo muhiim ah oo aan aaminsanahay inay kaa badbaadin doonaan guul darrooyinka la hubo.
Koorsadan waxaad ku baran doontaa
geedi socodka guud ee ka dambeeya DropShipping;
cadee arrimaha waaweyn ee adiga kugu gabbanaya;
go'aami qalabkaaga, jihayntaada, xulashadaada xayeysiinta iyadoo loo eegayo xaaladda dhabta ah ee miisaaniyaddaada
ogow dhacdooyinka la gaadhayo si loo dhiso dukaan isku xidhan, oo la jaanqaadaya falsafadaada iyo baahida macaamiishaada
qiimee xeeladaha ugu habboon ee xaalad kasta oo aad tahay.
Hirgelinta mashaariicda qaarkood mararka qaarkood waxay u baahan tahay maalgelin maaliyadeed oo ballaadhan. Laakiin maal-gashiga maaliyadeed ee waaweyni waligood kuma mashquulin mashaariicda guuleysta. Bulshadeenna waxaa ka buuxa kiisas maalgelinno ballaadhan ay ka dhasheen oo keliya masiibooyin shaqsiyadeed iyo kuwa wadareed
Dhoofinta: 12 Talaabooyin Muhiim u ah Guusha E-Ganacsiga Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Miyaan xaq u leeyahay in aan yareeyo tirada maalmaha fasaxa mushaharka la qaatay sababtoo ah saacadaha aan ka shaqeynaynin qaybta waxqabadka?
horeAbuur ganacsi internet ah softiweerka SYSTEME.IO
socdaLacag uga hel khadka tooska ah ee 0 €: Daabacaadda Diritaanka
“Dib -u -tababarid xirfadeed waa ficil ballanqaad. "
4| Yaa bilaabi kara booqashada soo kabashada ka hor?
ANSSI waxay bilawday Kormeerka xirfadaha amniga interneedka